चिसोबाट जोगाउँदा निमोनियाको जोखिम कम — Raranews.com
काठमाडौंँ, जाडोको मौसममा बालबालिकालाई निमोनिया लगायतका रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुने भएकाले यसमा सतर्कता अपनाउन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् ।
जाडोमा निमोनियाबाहेक रुघाखोकी, ब्रोनकाइटिक्स, दमलगायत सरसफाइको कमीले हुने रोगबाट समेत बालबालिका प्रभावित हुन सक्ने हुँदा यसमा सावधानी अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको हो ।
कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार जाडो मौसममा बालबालिकालाई हुने मुख्य समस्या श्वासप्रश्वाससम्बन्धी हो । त्यसमा रुघाखोकी, नाक बन्द हुने, घाँटी दुख्ने, टन्सिल लगायतका समस्या हुन्छन् । उहाँका अनुसार चिसो फोक्सोसम्म पुगेपछि ब्रोनकाइटिक्स, निमोनियाको समस्या देखा पर्छ । विभिन्न प्रकारका भाइरसबाट यी रोग लाग्ने गर्दछ । श्वास नलीमा सङ्क्रमण हुने, दमको समस्या पनि हुन्छ ।
जाडोमा बालबालिकालाई झाडापखाला पनि हुने गरेको जानकारी दिँदै डा. पौडेलले रोटा भाइरसले एक वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सताउने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरसफाइको कमी भयो भने छालाको सङ्क्रमण हुने गर्दछ ।” चिसोमा सरसफाइको कमी हुने र छालासम्बन्धी रोगले सताउने गर्दछ । छालाको समस्यामा जुम्रा पर्ने, चायाँ पर्ने गर्छ भने कतिपय अवस्थामा सुक्खा छाला भएर पनि समस्या उत्पन्न हुन्छ । चिकित्सकले यसलाई फङ्गल सङ्क्रमण भनेका छन् ।
कोरोना भाइरसको जोखिम पनि छँदैछ । कुनै व्यक्तिलाई सङ्क्रमण छ भने ती व्यक्तिबाट टाढै रहनुपर्छ । बच्चालाई जलविनियोजन हुने सम्भावना हुन्छ । बच्चाको मिर्गौलासमेत फेल हुने अवस्था आउन सक्ने औँल्याइएको छ । वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. ज्योतिरत्न धाख्वाका अनुसार निमोनिया जाडोबाहेकको अन्य समयमा समेत हुन सक्छ तर जाडोमा बालबालिकालाई निमोनियाको उच्च जोखिम हुन्छ ।
निमोनियाबाट बच्न पोषणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै डा. धाख्वाले छ महिनासम्मको बच्चालाई अनिवार्य स्तनपान गराउन सुझाव दिनुभयो । यस्तै सन्तुलित आहार खुवाउने, आमाले सरसफाइमा ध्यान दिने, भीडभाडबाट समेत टाढै रहन उहाँले सुझाव दिनुभयो । चिकित्सकको सुझावअनुसार बालबालिकालाई उमेरअनुसार खोप लगाउनुपर्छ । निमोनियाविरुद्धको खोप लगाउनुपर्छ । रुघाखोकी लागेको मानिसबाट टाढा बस्नुपर्छ ।
यतिखेर विद्यालय बन्द भएर वा कोरोनाले गर्दा अस्पतालमा आउने बालबालिका कम मात्रामा आउने गरेको भन्दै डा. पौडेलले कोरोनापछि हुने समस्याले गर्दा बालबालिका अस्पताल आउन थालेको जानकारी दिनुभयो । भाइरस सङ्क्रमणपछि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ र निमोनिया देखिने उहाँको भनाइ छ । बालबालिकालाई निमोनिया भयो भने जाडो मौसममा अरू पनि जटिलता थपिने हुँदा अभिभावक विशेष चनाखो हुनुपर्छ ।